Ụlọ, ụlọ | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ụlọ, ụlọ
"Mee nchekwa"! Ihe eji eme ihe eji eme ihe: ụkpụrụ nke ime ihe, iwu nke ngwa, yana ọnụahịa efu
Oge mmalite nke oge na-ekpo ọkụ maka ndị na-azụ anụ na-eweta ọ bụghị naanị ọṅụ nke ije ụkwụ, ma nsogbu ahụ na fleas, akọrọ. Ngwụrụ nje nta na-anọchite anya ihe ize ndụ nye ahụ ike na ndụ nke ndị ezinụlọ na-ahụ maka ọrịa, ebe ọ bụ na ha na-ebute ọrịa na-efe efe. Ihe kachasị mma megide ọbara ndị na-emerụ ahụ bụ ọkpụkpụ pụrụ iche.
Kedu ka o si arụ ọrụ? Kwụsị na fleas na akọrọ na akpọnwụ
Gaa na fleas na akọrọ, tinyere ndị na-agba ume na sprays - ihe kachasị ewu ewu na ịlụ ọgụ maka anụ ndị ọzọ. Ha bụ eluigwe na ụwa, dị mfe iji na ọnụ ala. Ka anyi gbalịa ichota ha karia. Otu esi eme Ihe niile tụlee bụ otu. Ihe na-arụ ọrụ na-agbakọta n'ime epidermis, ntutu isi, na abụba subcutaneous.
Nile karịa na i nwere ike igbu nje ahụ! Ụzọ dị irè nke fleas: shampoos, ịgba ọgwụ mgbochi, sprays na ndị ọzọ
Ọ bụrụ na a hụrụ ụgbọ mmiri na anụ ụlọ, a na-atụ aro na a ga-ewepụ ya ngwa ngwa, ebe ụmụ ahụhụ nwere ike imebi anụ ahụ. Akọrọ abụghị ihe dị ize ndụ, yabụ mgbe a na-atụ aro ka ụmụ anụmanụ na-eje ije na-edebe nlekọta. Mgbe ị na-ahọrọ ọgwụ na-achịkwa ngwaahịa, nke mbụ, ị kwesịrị ilekwasị anya na ngwongwo nke ngwaahịa a, ebe ọ bụ na ọnụnọ nke kemịkal dị ukwuu nwere ike ime ka akpụkpọ anụ ma ọ bụ nsị zuru oke nke ahụ.
Bibie ha! Ụmụ mmadụ na-agba ọsọ n'isi: otu esi kpochapụ na mgbochi
Ọ na - apụta na achọtara ndị ahụ ọ bụghị naanị na ụmụ anụmanụ. E nwere uzu mmadu. N'oge gara aga, ọ bi na South America, ma na-ebi ndụ ebe ọ bụla mmadụ bi. Nri nke ụmụ ahụhụ ndị a na-ewetara ndị mmadụ nnukwu nsogbu. Ha anaghị ebi n'ahụ mmadụ mgbe nile, n'ihi na ọ bụrụ na e jiri anụmanụ tụnyere ya, ọ naghị enwe ahịhịa ndụ.
Flea alaeze thunderstorm - "agụ owuru" tụlee megide fleas na akọrọ, yana shampoos, sprays na collars
Ndị enyi kachasị mma bụ ụmụ anụmanụ. Ihe ka ọtụtụ n'ezinụlọ nwere anụ na-esi ísì ụtọ n'ụlọ ha ma ọ bụ ụlọ - pusi ma ọ bụ nkịta. Nke a bụ nnukwu ọṅụ, ma ọ bụ ibu ọrụ, nke gụnyere ịlekọta ahụ ike nke anụ ahụ. Ọtụtụ mgbe, anụ ọhịa na - ejide ụba - fleas na akọrọ. Ikwesiri idozi nsogbu a dika oru oma dika o kwere mee.
Chupu ha n'ulo gi! Otu esi achichapu fleas na ulo na onwe ya na itinye aka na ndi oru puru iche
Enweghị ike ịgụta ụsọ ụgbọ mmiri n'etiti ndị chọrọ na ndị bara uru bi n'ụlọ ahụ! Ha na-awakpo ndị mmadụ, na-ata ma na-akpata ọtụtụ nsogbu. Ịla n'iyi na mbibi ha ekwesịghị ya, n'ihi na nje ndị a na-aba ụba na ọsọ ọsọ. Esi agha? Ọ bụrụ na anụ ụlọ dị n'ụlọ ahụ, ihe mbụ ị ga-eme bụ ịmepụta ọrịa ahụ n'aka ha.
Enweghị onye enwere! Ụdị mmadụ: ụdị na mmebi
Nkwubi okwu nke fleas nwere ike ibi na mmadu bu ihe a na-aguta mgbe nile. Ha anaghị adị ndụ na ụmụ mmadụ, dịka eziokwu, na nwamba, nkịta, anụmanụ ndị ọzọ na nnụnụ. Ha na-eji mmadụ dịka njem ma ọ bụrụ na ha adịghị achọpụta na mberede na nso ihe kwesịrị ekwesị (nkịta na-akpafu, cat, oke, wdg)
N'ihe banyere ndi na-emeputa ihe nlekota: Advantix maka nwamba, Hartz, tụlee ihe mgbochi na ihe ndi ozo
Ụnyaahụ gị na-enwe obi ụtọ ma na-enwe obi ụtọ, ma taa ọ na-ele anya na ọ dịghị mma? Na mberede, ọ na-esi n'apịtị ahụ gbapụ, na-eme ka ajị ya gbanwee n'obere mmegharị? O yikarịrị, ndị ọbịa a na - akpọghị - fleas - enwetatụla na anụ ụlọ gị. Ị ga-asị na pusi adịghị ahapụ ụlọ ahụ, nkịta na-ejegharị na nhịahụ ma ghara izute anụmanụ ndị ọzọ na enweghị ike ibute ọrịa ndị a.
Ị nwere ike ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa niile. Astronauts na-ebi ndụ ruo ọtụtụ afọ n'ọdụ ụgbọ mmiri. Ụmụ mmadụ abụghị taa - echi ga-anagide ọrịa kansa na ọrịa AIDS. Anyị na-atụ egwu fleas! Nke a abughi ihe ijuanya. Ọ dị ndụ afọ 55 gara aga. Ọnọdụ ebumpụta ụwa nke gburu nnukwu nne anaghị eweta nsogbu dị nro a.
Chebe nwa gị! Ọkụ na-eme ka a mata otú e si azụ ụmụ nje
Ọtụtụ n'ime ụlọ nwere hamster. Ọ bụ ezie na ọ dị ọcha, ọ pụkwara inwe fleas. Ha abughi nani na ya, kamakwa na-agafe na anu ndi ozo ndi bi n'otu ime. Ịmata na ndị ọrịa si nwatakịrị na-adịghị mma bụ nsogbu, n'ihi na ọ dị ọcha mgbe niile. Ka o sina dị, ọ ga-ekwe omume ịchọpụta na ihe adịghị mma n'ihi nchaghachi na ọnyá ndị dị n'okpuru uwe.
Nyochaa nke kacha dị irè! Ngwá na-agba agba n'ime ụlọ: raptor, agha, na ndị ọzọ
Domestic fleas - nnukwu nsogbu! Obere iwe iwe na-egbu mgbu na-amụba ngwa ngwa. Ma iji mee ka "ndị agbata obi" a rụọ ọrụ siri ike. Ọ bụghị ụmụ ahụhụ ọ bụla kwesịrị ekwesị maka mbibi nke ndị na-egbu ọbara! Ụdị ọgwụ mgbochi flea bụ Fleas bụ monophages nke na-eri nri na ọbara, n'ihi ya, enweghị isi na-eji azụ.
Naanị otu dobe, ma dịka onye nnapụta! Kwụsị si fleas Uru maka nwamba, ntụziaka maka ọgwụ
Uru (Uru) - uzo iji merie fleas na anu ulo, ndi German weputara Bayer HealthCare AG. N'oge ọ dị adị, ọtụtụ ndị ọkachamara n'ihe banyere ọgwụgwọ na ndị nwe anụ ahụ na-enyocha ọgwụ ahụ. Onye na-ahụ maka ụmụ ahụhụ na-agwọ ọrịa dị oke nchebe na-echebe ụmụ anụ ụlọ site na nje nje na-aṅụ ọbara, bụ nke, n'aka nke ya, na-ebute ọtụtụ ọrịa.
Chebe gị purr! Kwụsị agụ owuru maka nwamba na ụzọ ndị ọzọ nke onye na-achị si fleas na akọrọ
Akọrọ na fleas bụ ndị na-ebute ọrịa nke nwere ike ịkpata mmetụta na-enweghị ike ịba n'ahụ mmadụ. Ha abaghị uru na ndụ ụmụ anu ulo. Iji chebe pusi gị site na ọrịa na-arịa ọrịa na ọrịa, ị nwere ike iji ọgwụ ndị dị mma. Ọgwụ Leopard ga-echebe anụmanụ ahụ ma mee ka ndị mmadụ ghara ịtụ ụjọ maka ịmalite ịmịnye ụmụ ahụhụ na ụlọ.
Na nchebe nke nwamba gị! Onye ọka iwu: anụ uzuzu na ịkwanye ịkụ
Rụbaa ihe nkedo Cat na-akpata site na Bayer Animal Health Division nke pụrụ iche na imepụta ihe ngwọta ụmụ ahụhụ maka ụmụ anụmanụ. Ha dị irè n'ịlụ ọgụ ma ọ bụ ọrịa ndị na-apụ apụ n'èzí (ihe mgbochi, fleas), na nke ụlọ (helminths). Ya mere, anyị ga-atụle n'ụzọ zuru ezu ụzọ nke Iwu Lawyer.
Ha ga-ekele gị! Kedu ka esi esi na nwamba nweta fleas
Ọ ga-esiri ike ugbu a ịchọta ezinụlọ ebe ọ na-enweghị cat, n'ihi na enweghị nkedi bụ nwa mgbei! Ha na-enye anyị nnukwu nsogbu, ha na-agbaji akwụkwọ ahụaja, na-eteta n'abalị, ha na-ezu ohi sausaji si na tebụl, mana anyị hụrụ ha n'anya ma ghara iche n'echiche ndụ anyị n'emeghị ka mmasị anyị dị ọcha. Red na nwa, na-acha ọcha na nke nwere ọnyá, fluffy na onye na-acha ọcha-ntutu isi, ndo na-edozi ahụ na nwamba ndị na-agagharị onwe ha - ha niile bụ ndị ọkacha mmasị anyị!
Cheap na oru oma! A celandine si fleas na akọrọ maka nwamba
Celandine ma ọ bụ ahịhịa wit, dịka ọ na-akpọ ndị mmadụ, nwere ọtụtụ ihe bara uru. A na-akwadebe ọtụtụ ọgwụ na ndabere ya, gụnyere preparations antiparasitic maka ụmụ anụmanụ. Mkpụrụ "Celandine" sitere na fleas na akọrọ maka nwamba bụ ọgwụ ọjọọ anụmanụ. "Celandine" - usoro ọgwụgwụ Ngwadebe nke gụnyere alkaloids celandine - ọgwụ ndị siri ike nke a ga-eji jiri nlezianya mee, na ịgbaso ntuziaka.
Enweghị ihe ị ga-eji azụ anụ ụlọ gị, ma enweghị obi ụtọ na ịrịa ọrịa! Frontline for cats: price and instructions for use
Otu n'ime ihe ndị na-aṅụ ọbara na-egbu ọbara maka nwamba, nke kachasị dị irè ma dị mma bụ tụlee. Ihe ndị dị otú ahụ dị mfe iji mee ihe, ha na-etinye aka na mpaghara nke anụ ahụ na-akpọnwụ ma na-enwe ụmụ ahụhụ na-ewepụ ihe mgbakasị ahụ metụtara ọdịdị nke pests. Nmepụ a na-eme n'oge a adịghị emerụ ahụ ike nke obere ụmụaka.
Ọ bụghị ọnụ ma dị irè! Flea tụfuru maka nwamba: iwu nke ojiji, yana nkenke nkenke nke kachasị mma
Mgbe ị na-anakwere nwa ehi dị ọcha n'ime ndụ gị, ị ga-aghọta na ibu ọrụ nke onye nwe ụlọ ahụ abụghị naanị na-ejupụta nnukwu efere na nri ma na-achicha ya. Mgbe ufodu, anumanu nwere ike inweta "ndi enyi" na-aṅụ ọbara nke na-eji obi ụtọ na-etinye akpụkpọ anụ ọhụrụ nke enyi ha, tinyere ụlọ ahụ dum.
Mara mma agbụ na-echebe! Ngwakota nkuzi maka nwamba
Ngwakọta ahụ site na fleas na akọrọ maka nwamba dị mfe na nchekwa. O zuru ezu iji tinye nkịta ma ị nwere ike ichefu banyere nje. Ọ bụ ezie na ọ bụghị eziokwu niile. Ka anyị ghọta ajụjụ a nke ọma. Otu o si arụ ọrụ Ihe olu ahụ bụ teepu plastik nke nwere ogologo 30 ruo 40 centimeters n'ogologo, nke a na-etinye na ọgwụ ọgwụ antiparasitic.
Wepu nje ndị dị ọcha! Foo shampoos maka nwamba
Oge mgbe ọfụma na-eme ka ịzụta na nhazi nke pusi dịla anya. Ugbua enweghi ike n'ulo ma obu ulo o nweghi anu ozo. Ọ dịghị mkpa ụdị mmanụ aṅụ ọ bụ - pusi dị ọcha ma ọ bụ agba chara chaa chaa. Ọ bụ naanị na petry furry bụ nsogbu ndị metụtara mmezi na ahụike nke pusi.